DO oo xafiiskiisa u wareejinaya Rinkeby/Tensta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
DO oo xafiiskiisa u wareejinaya Rinkeby/Tensta
La daabacay måndag 10 juni 2013 kl 09.20
Sawirle: Bertil Enevåg Ericson/Scanpix
Waxaa lagu talajiraa in xafiiska wakiilka ka hortagga cunsuriyadda oo ay ka shaqeeyaan ilaa 100 qof loo raro mid ka mid ah labada xaafadood Rinkeby ama Tensta oo ku duleedka Stockholm. Ujeeddada go’aankaasi ayaa ah in la tirtiro fekradaha oo ah in ay xaafadahaas dadku ka guuraan oo ay ku yar tahay dhexgalka bulshada inteeda kale. Sidaasna waxaa qoray wasiirka arrimaha isdhexgalka Erik Ullehag (FP).
Sidaas awgeed ayey dowladdu hadda u xilsaartay DO in uu u hawlgalo sidii xafiiska hay’adda loogu wareejin lahaa xaafadaha Rinkeby/Tensta. Taasina waxay qayb ka tahay sidii sare loogu qaadi lahaa sumcadda xaafadahaas.
Sannadihii ugu dambeeyey hay’ado badan ayaa ka guurayey xaafadaha ku yaal bannaanka Stockholm. Hase yeeshee, waxay xisbiyada ku midoobey maamulka degmada Stockholm isla garteen muhiimadda in hay’adaha maamulka degmada loo raro xaafadaha degmada ka tirsan kuse yaal hareeraha Stockholm.